December 2021 - Page2of 12 - SonSon LinLin
ေဆာင္းရာသီမွာ ႏႈတ္ခမ္းသား ေျခာက္ေသြ႕သူမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား…..
December 31, 2021 sonsonlinlin 0
ဆောင်းရာသီမှာ နှုတ်ခမ်းသား ခြောက်သွေ့သူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ ဆောင်းရာသီမှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ အရေပြားဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေထဲမှာနှုတ်ခမ်းသား ခြောက်သွေ့ အက်ကွဲတာကလည်း စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာ တခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ခမ်းသားတွေ ခြောက်သွေ့အက်ကွဲလို့ ကြံရာမရ ဖြစ်နေတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက်အခု ဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းတွေက အသုံးတည့်စေမှာပါ။ (၁) သျခားသီး မျက်နှာပေါင်းတင်တဲ့အခါ အသုံးပြုကြတဲ့ သခွားသီးစိတ်လေးတွေကို နှုတ်ခမ်းသား ခြောက်သွေ့အက်ကွဲတဲ့ အခါမျိုးမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ သခွားသီးစိတ်လေးတွေ ကပ်ထားပေးရုံနဲ့ရေဓာတ်ကို ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးပြီး စိုပြည်ချောမွေ့စေမှာ […]
အခ်ိန္တိုအတြင္း ဝက္ၿခံ အမာ႐ြတ္ေတြကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္မယ့္ သဘာဝနည္းလမ္းမ်ား
အချိန်တိုအတွင်း ဝက်ခြံ အမာရွတ်တွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်မယ့် သဘာဝနည်းလမ်းများ မျက်နှာ အသားအရေပေါ်မှာ ဝက်ခြံပေါက်တဲ့အခါ စိတ်ညစ်ရသလို ဝက်ခြံပေါက်ပြီးတဲ့အခါ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဝက်ခြံအမာရွတ် ချိုင့်ခွက်တွေကြောင့်လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ကြရပြန်ပါတယ်။ ဝက်ခြံ ပျောက်သွားသည့်တိုင်အောင် ကျန်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်တွေကြောင့် စိတ်မညစ်ရလေအောင် ဝက်ခြံ အမာရွတ်တွေကို အချိန်တို အတွင်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်မယ့် သဘာဝ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ (၁) သခွားသီးကို ကြိတ်ချေပြီးရလာတဲ့ သခွားရည်ကို ဂွမ်းစလေးနဲ့တို့ပြီး ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေပေါ်မှာ […]
ေျခမထက္ ေျခညႇိဳး ရွည္တဲ့ သူေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ လက္မလႊတ္သင့္တာလဲ ?
ခြေမထက် ခြေညှိုး ရှည်တဲ့ သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်တာလဲ ? ခြေညှိုးဟာ ခြေမထက်ရှည်တဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုလူတွေရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ယောကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လိုလူတွေကိုတွေ့ရင်တော့ လက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့။ သူတို့ဟာ ချစ်ပြီဆိုလဲ သူများနဲ့မတူသလို မုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်ကြည့်တတ်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ ၁။ အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။ ၂။ အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်တယ်။ ၃။ ချစ်သူကိုဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်။ […]
လင္မယား ျဖစ္ရျခင္း အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (၂) မ်ိဳး…/
၁။ ပုဗၺသႏၷဝါသ – ေရွ႕ဘဝ၊ ဘဝ မွ လင္မယားျဖစ္ခဲ့ရဖူးေသာေၾကာင့္ လင္မယားျဖစ္ရ၏။ ၂။ ယခုဘဝတြင္ တစ္ဦး၏အက်ိဳးကို တစ္ဦးက ေစတနာအျပည့္နွင့္ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးျခင္းေၾကာင့္ လင္မယားျဖစ္ရ၏။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီတဲ့ အၾကင္လင္မယားျဖစ္ပါက သမၼသဒၶါ – သဒၵါတရားခ်င္းတူညီ သမသီလာ – အက်င့္ခ်င္းလည္းတူညီ သမစာဂါ – စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းမႈခ်င္းလည္း တူညီ သမပညာ – အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚ၊ ပညာခ်င္းလည္း တူညီမည္ဆိုိပါက ဤ […]
December 30, 2021 sonsonlinlin 0
ဆောင်းတွင်းမှာ ဗောက်ပြဿနာအတွက် ဖြေရှင်းနည်းလေးများ ဗောက်ထ တာဟာ သိပ်ကို စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းလွန် းပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာမှမဟုတ်ဘဲ ရာသီမရွေးဗောက်ထ တတ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အသားအရေ ခြောက်သွေ့လို့ ဗောက်ထကြပြီး တစ်ချို့ကလည်း ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ မတည့်တာကြောင့် ဗောက်ထကြ ပါတယ်။ နွေရာသီမှာ ချွေးထွက်များပြီး ဦးရေပြားယားယံကာ ဗောက်ထကြ ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ မတည့်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ ခေါင်းလျှော်ရည်ကို ပြောင်းသုံးပေးသင့် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးကွက်ထဲမှာ […]
ဗဟုသုတရရှိအောင်လို့မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ် ဂမ္ဘီရကြက်ခြေ ခတ်အကြောင်းပုံစံ(၃)မျိုးနဲ့မျှဝေပေးပါ့မယ်နောက် ထက်လဲရှိ ပါသေးတယ် လောလောဆယ် ချစ်မိတ်ဆွေ များလွယ်ကူစွာ သိရအောင် ဒီပုံတွေ သာမှတ်သားထား ပေးပါပုံ(၁) ကံလမ်းနဲ့ မထိတဲ့ ကြက်ခြေခတ် နှလုံးလမ်းနဲ့မ ထိတဲ့ ကြက်ခြေခတ်ဦးခေါင်းလမ်း ဉာဏ်နဲ့ မထိတဲ့ ကြက်ခြေခတ်ဒါမှ ဂမ္ဘီရကြက် ခြေခတ် အစစ်ပါ ပုံ(၂)အောင်မြင်ရေး လမ်းနဲ့ မထိတဲ့ ကြက်ခြေခတ်နှလုံးလမ်းနဲ့ မထိတဲ့ ကြက်ခြေခတ် ဦးခေါင်းလမ်းနဲ့ မထိတဲ့ ကြက်ခြေခတ်ဒါ မှဂမ္ဘီရကြက်ခြေခတ် […]
မင်္ဂလာဦးည ရင်ခုန်သံ ”အားးးးးးး!!! ” အော်သံကြားပေမယ့် ဒါသဘာဝပဲလေ ဆိုပြီး အိမ်သားများ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်သည်… ” မင်္ဂလာဦး ည ရင်ခုန်သံ ” ” အားးးးးးး!!!” အော်သံ ကြားပေမယ့် ဒါ သဘာဝပဲလေဆိုပြီး အိမ်သားများ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်သည် …။ မင်္ဂလာဦး ညပေးကိုးးးးး အော်သံကြားပြီး သိပ် မကြာလိုက်. . . လူပြိုကြီး Moe Aung […]
ခြေထောက်က အမာရွတ်ဟောင်းတွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်း (၅) မျိုး ပျိုမေတို့အတွက် အမာရွတ်တွေဟာ တကယ်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ခြေထောက်မှာ အမာရွတ်တွေရှိနေတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလည်းလျော့နည်းသလို စိတ်ကျဉ်းကျပ်ပြီး ရှက်ရွံ့သလိုလည်း ခံစားရပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အမာရွတ်တွေကို သက်သာပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဗီတာမင် E အဆီ ဗီတာမင် E ဆေးတောင့်လေးမှာ ပါဝင်တဲ့ အဆီလေးကို ဖောက်ထုတ်လိုက်ပါ။ ရလာတဲ့အဆီလေးကို အမာရွတ်တွေကို လိမ်းပေးကာ နှိပ်နယ်ပေးကာ […]
သူေဌးေတြနဲ႔ ဆင္းရဲသားေတြ အျပန္အလွန္ မုန္းေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း…
ဆင်းရဲသားတွေဂိမ်းဆော့နေချိန်မှာ..သူဌေးတွေ..အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ် ဆင်းရဲသားတွေဖုန်းသုံးနေချိန်မှာ..သူဌေးတွေ…အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ် ဆင်းရဲသားတွေအိပ်နေချိန်မှာ..သူဌေးတွေ..အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်. ဆင်းရဲသားတွေချစ်သူနဲ့ပျော်ရွှင်နေချိန်မှာ..သူဌေးတွေ…အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ကြဘူး ဆင်းရဲသားတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ငြီးငြူနေတဲ့အရာတွေကို သူဌေးတွေက မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းရှာကြံပြီး ကြိုးစားခဲ့ရတယ် ဆင်းရဲသားတွေ တစ်ရက်စာ၊ တစ်လစာအတွက်ပဲပူတဲ့အချိန်မှာ သူဌေးတွေဟာ ၅နှစ်စာကနေ နှစ် ၁၀၀ စာလောက်ထိပူခဲ့ရတယ် ဒ့ါကြောင့် သူဌေးတွေဟာ ဘာမှမလုပ်ပဲ ဇိမ်ကျနေတဲ့ ဆင်းရဲသားတွေမုန်းကြတာဖြစ်တယ် ဒီလိုနဲ့ အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာ သူဌေးတွေကို ဆင်းရဲသားတွေက ပြန်မုန်းလာကြတယ် ဆင်းရဲသားတွေကထင်တယ်. သူဌေးတွေဆိုတာ အချိန်ပြည့် ဇိမ်နဲ့နေရတယ် ဆင်းရဲသားကထင်တယ်..သူဌေးဆိုတာ ရေကန်အသင့်ကြာအသင့် ချမ်းသာလာတာဖြစ်တယ် […]
အသက်ရှုမှားလောက်အောင် ဆံနွယ်လေးတွေ ပျော့ပြောင်း တောက်ပြောင်စေမဲ့နည်း စာဖတ်သူတွေကို မျှဝေပေးမဲ့ ရိုးရာနည်းလမ်းလေး ကလည်း ဆံနွယ်လေးတွေကို ဝင်းလက်တောက်ပြောင်စေမှာဖြစ်လို့ စာဖတ်သူတွေ နှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ပျားရည်နဲ့ သစ်ကြံပိုးခေါက်မှာ အဟာရဓါတ်ပြည့်ဝစွာပါဝင်တဲ့အပြင် ဦးရေပြားကို စိုပြေစေတာကြောင့် ဆံနွယ်အဖျားမှာကွဲတာ၊ ဗောက်ထတာ နဲ့ ဆံပင်ကျွတ်တာတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပြုလုပ်ရမဲ့ နည်းလမ်းလေးကတော့ ဒီလိုပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်း သစ်ကြံပိုးခေါက် အမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ […]